zvose vashanyi vanorota nezve kushanyira matombo akavanzika muEurope pamwe neakakurumbira eEuropean metropolises. A Photo vavo vachifara ndakamira pedyo neEiffel Tower, YeColosseum kana Big Ben zvinoita munhu wose anzwe asina (uye isu tiwane zvachose kuti!). Ungave uri Instagram muropa kana "wechokwadi" mufambi, kuenda kunzvimbo dzakapoteredza nyika zvose!
1. Saxony, Musanganiswa weElectlectic weMasikirwo Nhoroondo uye yedu yekutanga sarudzo yeakavanzika Matombo muEurope
Chokutanga iwe kufunga kana kutaura Luxembourg ndiye mabhanga. Nyika Zvinozivikanwa chaizvo nokuda kwavo. Asi Luxembourg raMwari steepled machechi, ibwe dzimba, uye migero midiki inoita kuti kuishanyira kunakidze kupfuura zvaungatarisira. Ndokusaka nzvimbo iyi ndeimwe zvisingawanzoitiki anokosha mu Europe yakavanda pakati kondinendi iri misoro. Chinhu nzvimbo yakanaka, vakaisa panguva apo Petrusse uye Alzette nzizi kusangana. Unogona kushanyira dzimwe mumaresitorendi uye hudyu nembariro padhuze ne nzvimbo yepakati. Mukuwedzera, meme Philippe II ane boka muzvitoro, saka imi nani kuva vakagadzirira tipedze nembiri shoma! pamwepo Rukuzemubhogu inzvimbo wakakwana nokuda da vhiki.
chete 45 maminitsi nechitima tasva kubva kuGenoa, ichi vehove taundi duku haana yakawanda kunofanira-Anoona. zvisinei, kufanana avo munhuderrated nzvimbo vanodzorera kuti ichokwadi hunokosha Europe zvakavanzika, uyu zvakare kuva pane zvaunonyora. Nayo dzimba dzine mavara uye migwagwa ine materu, Camogli inzvimbo hwakakwana famba refu. Kufamba kuburikidza Camogli, Waona chinoshamisira Hotels, zvivako akare, uye zviduku Mabheka. Usati kuzviziva – iwe uchawira mune rudo panzvimbo ino! Uye kana iwe kuneta famba, hapana chinhu chiri nani pane kuva zvokudya zvemasikati dzimwe reguta mumaresitorendi. A nguva yakakwana kushanyira Camogli aizova May, panguva hove mutambo. The chikuru Kukwezva chiitiko ichi ndicho 28-tani pani. Rinoshandiswa, iwe wafungidzira zvakanaka, pakubika hove.
5. Shona, Guta reMahombekombe muEngland rinovhara runyorwa rwedu rweMatombo Akavanzwa muEurope
Takabatsira here nekufunga kuti ndeipi nzvimbo yekushanyira inotevera pane ako anouya madanho? Kugona! Idzi nzvimbo shanu dzinongova muenzaniso sei kuchine vamwe vanzika uye matombo anokosha akavanzwa mu Europe. Nyika izere isingatarisirwi kumirira kuti kuziva. Kuenda nechitima inokubvumira kuti uone nzvimbo idzi kubva kune imwe kona. wo, uchanakidzwa rwendo yenyu zvakawanda. Kana uchida batsira kuronga rwendo yako, kana uchida kutenga matikiti, ndapota kutishanyira panguva SaveATrain.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ine kubatana iyi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fhidden-gems-europe%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi kuona Embed Code)